Zuva: 9 October 2019
1. PASTAVILLA PASTA Pastavilla, sezvo inofungidzirwa kuva ndiyo yekuItaly rudzi rweTurkey pasita. Yakatangwa mu1928. Panguva iyoyo, akatumidzwa zita rekuti Pastavilla ku1992 paakanzi Kartal Pasita, uye ave achisvika nhasi. 2. TÜRKÇE HOME To Turgut Aydın Kubata [More ...]
Yedu OIL: Yıldız Holding yatengesa chinyorwa chedu kuJapan Ajinomoto mu2016. COLA TURKA: 2015 yakatengeswa naÜlker kuJapan Dydo DRINCO. MILK: Inodhakwa neFrench Group Lactalis. SANA OIL: [More ...]
Metro Istanbul yaona iyo yepamba traction shanduko yekugadzira purojekiti iyo ichapa simba kune metro uye tramways. Saka, mamirioni euros anoramba arimo mukati memiganhu yenyika. Istanbul Metropolitan Municipality chikamu emisasa Metro Istanbul, Istanbul rinokosha zvose upfumi Turkey kuti [More ...]
General Directorate of State Airports Authority (DHMI), 2019 gore raSeptember ndege yekufamba nendege, vafambi nehuwandu hwekutakura zvinhu zvakaziviswa. Naizvozvo, munaSeptember; huwandu hwendege hunobuda uye huchienda kunzvimbo dzekutandarira, 77.365 mudzimba [More ...]
Turkish Standards Institute (TSE) Kayseri Dunhu Coordinatorship yemakambani kambani manejimendi management system yakaitwa. Mumusangano wekuongorora wakaitwa mushure meongororo, zvakataurwa kuti kambani yedu yakaratidza kutungamira kwakabudirira muminda yemhando, nharaunda, simba, hutano hwebasa. TSE [More ...]
Sivas Demirspor Club 2019-2020 yakavhura mwaka. Sivas Demirspor Club mwaka wekuvhura chirongwa Tüdemsaş General Manager uye Sachigaro weSivas Demirspor Club Mehmet Basoglu, Demiryol-Is Union Sivas Bazi rezveMari Kemal Nyanzvi, Sivas Demirspor Club manejimendi [More ...]
Malatya Metropolitan Municipality iri kuita shanduko, shanduko uye kumutsiridza inoshanda pane yeGolden Apricot Boulevard, iri iro hombe boulevard muMalatya, iyo inobatanidza Tecde neMaşti junction. Iyo 3.3 kilomita-yakareba, 50 mita-yakafara chikamu cheGoridhe Apric [More ...]
Gaziantep Metropolitan Meya Fatma Sahin, Belkis Dunhu reSehitkamil mudunhu vakaenda kunoshanyira vavakidzani. Sahin, kuitira kuti agadzirise dambudziko rekusakwana kwemabhazi muchikwata chevavakidzani, Belkis akakumbira kutanga kuedza kuwedzera bhazi munzvimbo iyi. mumagariro [More ...]
Nyika Mutambo Kuronga kweMetro Nhandare muIstanbul. IMM, izvo zvichaita kuridzwa neChishanu manheru muna Turkey - Albania dzakawanda dies yakanga yakakodzera nguva pakukoka maawa yevamwe pevhu mitsetse. Ndege mumakona echitima chechitima anoshanda neMetro Istanbul, anotsigira weIstanbul Metropolitan Municipality (IMM), 11 [More ...]
Kunyangwe kuderera kukuru kwe2019 mune tsaona dzeMetrobus, IETT yaita ongororo nyowani panjodzi mbiri dzichangobva kuitika. Musoro weKuongorora Bhodhi wakapihwa pachako kuti aongorore tsaona idzi. Akakumbirwa nyanzvi kubva kuChamber of Mechanesa Majini [More ...]
Manheru ken Kana uchitsvaga iyo TCDD webhusaiti, takazviwana isu pane 2019 Investment Chirongwa peji. Uyezve, takashamisika kuona iwo mashoko ari papeji. Zvatinoona izvi: TCDD General Directorate 1 Muna Nyamavhuvhu 2019 yakaita rechishanu kudzokorora pachirongwa chekudyara. [More ...]
Chiratidziro "Kubva kuIstanbul kuenda kuHijaz: Hicaz Railways neRugwaro" yakarongedzwa neTurkey Cooperation uye Coordination Agency (TIKA) uye Yunus Emre Institute (YEE) yakavhurwa muIrbid, iro guta rechipiri rakakura kuJodhani. Yakapera June aine TİKA uye YEE [More ...]
Mutevedzeri weChP Bursa Mutevedzeri, nhengo yeParamende Yeparamende yeKanzuru yeNurhayat Altaca Kayışoğlu, Gurukota rezvekutakura nekuvakiswa kwezvinhu Mehmet Cahit Turhan'a Bursa Ankara High Speed ​​Chitima Chikoro chakabvunza kuti ripere riinhi. Hwaro hweBursa-Ankara High Speed ​​Chitima 23 Zvita [More ...]
3 inotarisa pane metro njanji masisitimu. Iyo International Metrorail Forum yakaunza pamwechete vanoita vekutora sarudzo pamwe nebazi rakazvimirira paA Ankara ATO Congresium. Pasi pesimba reCahit Turhan, Gurukota rezvekutakura uye Zvivakwa, TCDD Main Support, KGM, AYGM Istanbul Metropolitan Municipality [More ...]
Rubber Coatings kuLevel Crossings Railway Mabasa Inoitwa Iro Zvakafanana Railway Nhau uye Dzimwe Nhau Iwe Unogona Kuve Unofarira InRayHaber 25.01.2019 Tender Bulletin 25 / 01 / 2019 Iko hakuna zvinyorwa nyoro zve25.01.2019 pane yedu system.RayHaber 04.02.2019 Tender Bulletin 04 / 02 / 2019 Mune yedu 04.02.2019 [More ...]
Hyvä Group rinorongwa muTurkey "International Rail, Light Rail uye Logistics Fair" - EURASIA yokudadira pakati xnumx'uncu waMarch 9 3-5 ichaitwa panguva TUYAP Fair Center Konya. Parizvino, iyo yakaitirwa muIzmir ichaitirwa muKonya mupepanhau [More ...]
Turkey locomotive uye Engine Industry se (TULOMSAS), hofori yokuGermany Volkswagen motokari kuti anogadzirwa fekitari itsva wainyatsotaura hwaizogadzwa muTurkey vanotarisirwa kutakura "maviri-storey ngoro" kumumvuri mifananidzo, kekutanga muna HaberTürk ... Pano muTurkey, TULOMSAS ' Turkish mainjiniya, nyanzvi mune Eskişehir zvivakwa [More ...]
MES MAD Mutungamiri Hasan Engin akasimbisa kuti Mersin haana nguva yekurasikirwa kugadzirisa dambudziko rekufambisa, rinova rimwe rematambudziko makuru eguta redu. Metro [More ...]
Yakawedzera Metro Nzvimbo muIstanbul. Maererano neshoko kubva kuMetro Istanbul, M6 Levent-Boğaziçi University / Hisarüstü metro mutsetse wakawedzera huwandu hwe ndege. Mune chirevo chakanyorwa, zvirevo zvinotevera zvakapihwa: [More ...]
Nhasi muNhoroondo dzeChishanu 9 October Kubvumirwa kwe1890 Thessaloniki-Monastery Line yakapiwa kuna M. Alfred Kaulla, achiita sangano reGermany rinobatana na Deutsch Bank. Yakapiwa kuna Feriz muAmerica kare. 9 October 1918 Toros uye Amanos tunnels dzakapedzwa. kuvaka [More ...]